IZIBHENO ZENKONZO YENKONZO YENKXASO-MALI YOBUCHULE NE-ROLLING
Ibar ye-angle / umgca wokuveliswa kwebar
Umatshini wokuphosa uqhubekeka
Izixhobo zombane kwindawo
Ibar / i-bar engalunganga yokuvelisa umgca
Icandelo lokuveliswa kwensimbi yecandelo
I-Hr Round Bar
Izixhobo zokususa uthuli
Ufakelo kunye noKomishini
Inkqubo yobuGcisa yeNkqubo yokuNikezela nge-Oxygen ye-15T yoMbane we-Arc Furnace
Uqwalaselo lweNkqubo ye-1 iseti yomnyango we-oxygen lance yomlilo Imisebenzi ephambili kunye neempawu zolu lungelelwaniso lwe-Oxygen Lance Furnace Door: I-lance epholile yamanzi efakwe ecaleni kwesithando somlilo inemisebenzi yokuvuthela i-oxygen, i-foaming slag, i-combustion yesibini, i-decarburization, kunye ag...
Ikristali licandelo elibaluleke kakhulu kwizixhobo eziqhubekayo zokuphosa. Kwinkqubo yokuqina apho intsimbi etyhidiweyo itofwa kwikristali ukuze yenze ngokuthe ngcembe ubukhulu beqokobhe, icrystallizer iyafuneka ukuba ibe nokuqhuba kakuhle kobushushu, isakhono sokupholisa kunye...
Iimpawu zeLF furnace Refined Steel
I-1 LF Furnace Atmosphere Isithando somlilo se-LF senza unyango olunyibilikisiweyo lokusulungekiswa kwentsimbi phantsi koxinzelelo oluqhelekileyo, kwaye isigqubuthelo somlilo esipholileyo samanzi sinokusebenza njengomsebenzi wokutywina wokwahlula umoya. Xa ishushu, i-electrode yegraphite isabela kunye neeoxides ezifana ne-FeO kunye ne-MnO kwi-slag ukwenza i-CO gas, i-whic...
Iingxaki eziqhelekileyo zeeOveni zeCoke kunye neMiqathango yobuGcisa (2)
1.Kutheni ixabiso le-α kufuneka lilawulwe malunga ne-1.2 xa usebenzisa igesi ye-oven ye-coke ukufudumeza? Ixabiso le-α li malunga ne-1.2, enokwenza ukuba igesi ivuthe ngokupheleleyo kwaye ikhusele izingozi eziphezulu zeqondo lokushisa. Ukuba ixabiso le-α lincinci kakhulu, umthamo womoya awuyi kukwanela, okubangela ukuba i-combusti ingaphelelanga ...
Iingxaki eziqhelekileyo zeeOveni zeCoke kunye neMiqathango yobuGcisa (1)
1.Isandi esithi "Blasting" sivakala njani ngexesha lokutshintshiselwa kwee-oveni zecoke? "Ukuqhuma" kubangelwa ukuxutywa kwegesi ye-oven ye-coke kunye nomoya kwi-duct yegesi yezitena ukuze ivuthe kunye nokubuyisela. Ngokuqhelekileyo, "ukuqhushumba" kwenzeka malunga ne-10-20s emva kokutshintshiselana. Uninzi lwazo lwenzeka kwimibhobho yegesi yezitena apho phezulu...
Induction Coil Red Udaka
I-Medium frequency isithando somlilo induction coil insulation udaka olubomvu: yenzelwe ukukhusela i-coreless induction esithandweni somlilo kunye nomphezulu ongaphakathi wekhoyili ukukhusela izinto. Insulate kwaye ulibazise ukuguqulwa kwekhoyili. Ineempawu zamandla aphezulu, ukuxinana okuphezulu, ukuphakama ...
Intshayelelo emfutshane yezixhobo zokususa uthuli kwi-Induction Furnace
Inkqubo yokuFakelo kunye nokuQaphela kweSistim yeLadle Weighing System
Ukuthwala i-Rolling Mill
1, Semi-Ivaliwe Three-Hi Roller Ukuthwala Rolling Mill Good rigidity, uhlengahlengiso Axial iluncedo kwaye imvume incinci. Isixhobo sincinci kwaye silula. Ukuvulwa komqulu kulungelelaniswa ngokulinganayo. Xa i-rolling mill ilungiswa, umgca ophakathi uhlala ungatshintshi. Rapid roll cha...
Umatshini wentsimbi we-LMG325
LMG325 Grab Steel Machine 2.1、IiNzuzo zokuSebenza kweGrab Steel: uqwalaselo oluphezulu, olukhuselekileyo noluthembekileyo, ukusebenza kakuhle, ukugcinwa okufanelekileyo 1.INkqubo yePower 1）Yamkela injini yohlobo oludumileyo lwamazwe ngamazwe, amandla awomeleleyo, asebenzayo kwaye athembekileyo; 2) Dibana nokukhutshwa kwe-III kazwelonke ...
I-LMG240 ye-Mobile Grabber
Izinto eziluncedo zokuSebenza kweMveliso: 1）Itekhnoloji yolawulo oluchanekileyo ukufezekisa ukulingana okuhambelanayo kunye nokuphendula ngokukhawuleza xa impompo ephambili ifunxa itorque kunye netorque ye-injini; 2) Inkqubo ekhethekileyo ye-hydraulic kunye noyilo lwemibhobho yokunciphisa ilahleko yomatshini ngokwawo; 3) Isantya sokungenzi nto esizenzekelayo kunye...
Ngaphantsi kwe-Epidemic-Geli Machinery Breaks through Storm
Indawo ye-Xianyou yoPhuculo lwezoqoqosho, isiXeko sasePutian, kwiPhondo leFujian, China
© Copyright - 2010-2021: Onke amalungelo agciniwe. Kufakwe Iimveliso - Hot Tags - Sitemap.xml - AMP Mobile
Continuous Ivoti Matshini For Steel Billets , esizi siwisa Machine , Umatshini weConcast, Umatshini wokuphosa i-Cc, Continuous Ivoti Machine , Ccm Ivoti ,